Polisim-pirenena Hanatona kokoa ny vahoaka
50 no isan`ireo polisy hanatevin-daharana ireo efa am-perinasa, ka 30 no ``Officiers de police`` ary 20 kosa niofana ``Commissaires de police``.
Fitsaram-bahoaka sy vono olona tao Fianarantsoa Tsy mbola tratra ilay tovolahy, nangina ny raharaha
Iray volana latsaka izay no nisian’ilay fitsaram-bahoaka nahafaty an-dRakotoarimanana Alfred Yvon, voalaza fa nangalatra tao amin’ny faritry ny anjerimanontolon’Andrainjato Fianarantsoa ny 27 janoary teo.
Nisy ny fangatahana taratasy tany amin’ny fitsarana nahafahana nanao ny fisavana ny tokantranon’izy ireo ka nahatrarana rongony nilanja 2kg. Ankoatra ny rongony moa dia nahatrarana fitaovana hafa fonosana roa izay heverina ho fanaovana vola sandoka ihany koa ary nisy fanafody be dia be. Araka ny fanazavana nentin’ny kaomisera divizionera Ramilison Céléstin, lehiben’ny polisim-pirenena Vakinankaratra dia tsy mitsahatra ny mikaroka ny fametrahana ny fandriampahalemana izy ireo. Azo antoka fa matoa misy ireo akora fanaovana vola sandoka dia mandehandeha any ny fitaovana fanaovana azy. Manao antso avo ho an’ny vahoaka ny tenany amin’ny fanomezam-baovao samihafa. Ny fitobahan’ny mahadomelina no fototry ny tsy fandriampahalemana ka hiantsoany fifanomezan-tanana. Roa volana lasa izay dia nisy ny fahatrarana rongony nilanja 50 kilao tao Antsirabe ary niampy indray ny loharanom-baovao hafa nahitana ireto olona mpianaka ireto.